Car कार सहायक उपकरण हुनुपर्दछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B3B बजार समाचार
अप्रिल 12, 2021 अप्रिल 10, 2021 Tracie Johnson ब्लग, विशेष समाचार
पालले तपाईंलाई शिकारीबाट टाढा आफ्नो गाडीको छानामा सुत्न अनुमति दिन्छ।
जब तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ शून्य ग्यारेन्टीहरू छन् कि तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्ने कोही हुनेछ।
आज बजारमा विभिन्न मोबाइल कार शुल्कहरू उपलब्ध छन्।
कार मालिकको रूपमा, तपाईं यसको उपस्थिति अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं शिविरको लागि पाल टाँस्न सक्नुहुन्छ। केहि व्यक्तिहरू आपतकालिनका लागि जम्पर केबलहरूको साथ एक्सेसोरिज हुन्छन्। अरूले गुणस्तरीय फोन चार्जरमा लगानी गर्छन्। त्यहाँ धेरै सामानहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो कारमा थप्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई--कारको सामानहरू भएको पत्ता लगाऔं।
आज त्यहाँ दर्जनौं उत्कृष्ट पाल विकल्पहरू छन्।
१. छत पाल
के तपाईं एक ओभरल्यान्ड साहसी हुनुहुन्छ जो जमीनबाट टाढा रहन चाहानुहुन्छ? त्यसो भए छाना पाल सबै भन्दा राम्रो सहयोगी हो जुन तपाईं आफ्नो कारमा पाउन सक्नुहुनेछ। पालले तपाईंलाई शिकारीबाट टाढा आफ्नो गाडीको छानामा सुत्न अनुमति दिन्छ।
यो सुविधाजनक र सेटअप गर्न सजिलो छ र धेरै शिविरहरूमा मनपर्ने हो। डेरा किन्नुहोस् र त्यसलाई तपाईंको कारको छाना र्याकमा संलग्न गर्नुहोस्। पाल टाँस्न सकिन्छ र यसको भर्याable खुला र विस्तार गरेर।
आज त्यहाँ दर्जनौं उत्कृष्ट पाल विकल्पहरू छन्। ती सस्ता नरम शेलहरूदेखि लिएर चिरस्थायीसम्म हुन्छन्। यस पालको साथ, तपाईं कहिँ पनि रोक्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कारको कौसीमा ब्रीज गर्न सक्नुहुन्छ।
सेफ- तपाईंलाई भूमिमा कीराहरू र सरीसृष्टहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।
कम्फर्टेबल- यसमा जाल विन्डोज र डोरहरू छन् जसले यसलाई हावामा राख्छ। तिनीहरू पनि एक उच्च-घनत्व गद्दा संग।
एकल खाट- केवल एक व्यक्ति वा एक जोडी समायोजित गर्न सक्दछ।
कुकुरहरू र बच्चाहरूसँग यो सजिलो छैन - बच्चाहरू र कुकुरहरूलाई समायोजित गर्न धेरै दृढ छैन किनकि उनीहरू धेरै वरिपरि खेल्छन्।
२. जम्प केबलहरू
जम्पर केबुलहरू प्रत्येक कारमा हुनुको मुख्य हुन्छन्। ती आवश्यक छन् जब तपाईंको सवारी सुरु हुन सक्दैन। जब तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ शून्य ग्यारेन्टीहरू छन् कि तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्ने कोही हुनेछ।
जम्प स्टार्टर किटहरू ब्याट्री र उर्जा स्रोतहरूको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले तपाईंको कार सुरू गर्न सक्षम गर्दछ जब यो कारको ब्याट्रीमा यसको क्ल्याम्पहरू हुक गरेर असफल हुन्छ।
तपाईंलाई आफ्नो कार जम्पस्टार्ट गर्न अनुमति दिँदछ।
तपाईं यसलाई तपाईंको कारको पार्कि style शैलीको पर्वाह नगरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंलाई जम्पस्टार्ट मद्दतको लागि नजिक पुग्न तपाईंलाई अर्को गाडीको आवश्यक पर्दैन।
एकल जडान समावेश गर्दछ जुन तपाईंको कारको ब्याट्रीको लागि सुरक्षित छ।
होस्ट कारलाई हानी गर्ने बारे कुनै चिन्ता छैन।
यसलाई चार्ज गर्दै- तपाईंको जम्प स्टार्टरलाई सबै समयमा चार्ज गर्नुहोस्। यो एक असमानता हो किनकि तपाईं प्राय: यसलाई सेट गर्न बिर्सनुभयो।
कम ब्याट्री क्षमता - सानो जम्प स्टार्टर्सको कम ब्याट्री क्षमता छ। मतलब तपाई यसलाई कम्प्याक्ट कारमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
उन्नत टेक्नोलोजी र व्यापक इन्टरनेट प्रयोगको साथ, सबै हाम्रो स्मार्टफोनको वरिपरि घुमाउँछन्।
Mobile. मोबाइल चार्जर
उन्नत टेक्नोलोजी र व्यापक इन्टरनेट प्रयोगको साथ, सबै हाम्रो स्मार्टफोनको वरिपरि घुमाउँछन्। ड्राइभि when गरेको बेला पनि तपाईं आफ्ना स्मार्टफोनहरू बन्द राख्न सक्नुहुन्न।
तपाईं प्राय: तपाईंको फोनको ब्लुटुथबाट गीतहरू स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ वा नेभिगेशनका लागि गुगल नक्शा प्रयोग गर्नुहोस्। स्मार्टफोनहरूले तपाईंको जीवन सडकमा हुँदा सजिलो बनाउँदछ।
जब तपाईं कारमा तपाईंको फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसको ब्याट्री सकिदैन। तपाईं एक हुन सक्छ मोबाइल चार्जर तपाइँको यात्रा भर चार्ज राख्न।
आज बजारमा विभिन्न मोबाइल कार शुल्कहरू उपलब्ध छन्। तिनीहरू सस्तो र टिकाऊ छन्, ब्रान्डमा निर्भर गर्दै। कम्तिमा २ एम्पाइरको राम्रो ब्रान्ड पाउनुहोस् भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्, जुन छिटो चार्ज हुन्छ।
पोर्टेबल: कार चार्जरहरू साना र पोर्टेबल हुन्।
सजिलो फिट: यो कार सिगरेट लाइटर र स्टिकमा फिट हुन्छ। यसले तपाईंलाई तपाईंको फोन चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ।
टिकाऊ: कार चार्जरहरूले टिकाऊ ठोस सामग्रीहरू समावेश गर्दछ जस्तै एल्युमिनियम।
डिजाइन: शुल्क अद्वितीय डिजाइन र रंगहरूमा आउँछ।
अन्य कार मोडेलहरूसँग अनुकूलनीय छैन - प्रत्येक कार एक विशिष्ट चार्जरसँग उपयुक्त छ। दुर्भाग्यवस, तपाईंको कार चार्जर तपाईंको पार्टनरको कारसँग उपयुक्त छैन। यसैले, तपाईं एक चार्जर साझा गर्न सक्नुहुन्न।
महँगो कार कार चार्जर साधारण फोन चार्जर भन्दा बढी महँगो हुन्छन्।
सवारी उद्योग अगाडि बढिरहेको छ। प्रगतिको साथ, तीन सामानहरू तपाईंको ड्राइव बृद्धि गर्दछ। कार मोबाइल चार्जरले तपाईलाई आफ्नो यात्रा भर तपाईको फोन चार्ज राख्न अनुमति दिन्छ। टेन्टले तपाईंलाई भूमि माथि शिविर गर्न सक्षम पार्दछ जब एक साहसिकमा। अन्तमा, जम्प केबलहरूले तपाईंलाई आफ्नो कार जम्पस्टार्ट गर्न दिन्छ। यी तपाईंको गाडीमा उत्तम तीन हुनुपर्दछ।
अपार्टमेन्ट कार सांप्रदायिक समाचार उपकरण